အမည်မသိ SMS တွေပို့နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ -
ဒီတစ်ခေါက် Sunday မှာတော့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေတွေကို အပျော်အနေနဲ့လား? ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ကောင်မလေးကို Surprise Message တွေပို့မလား? ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းနံပတ်နဲ့ မဟုတ်ပဲ အမည်မသိ(Anonymous) အနေနဲ့ Message ပို့နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေနဲ့ Website အချို့ကို ဝေမျှပေးသွားပါမယ်…
ဒီ Website ကတော့ Character 160 နဲ့ ကိုယ့်ပို့ချင်တဲ့ ဖုန်းနံပတ်ကို Anonymous အနေနဲ့ SMS တွေပို့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံကလည်း အရမ်းရိုးရှင်းတဲ့ အတွက် သူငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေကို စနောက်ဖို့ နည်းလမ်းသစ်တွေ ရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလမ်းကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒီ Website ကတော့ နိုင်ငံသတ်မှတ်ချက်နဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ India နိုင်ငံတွင်းက ဖုန်းတွေကို Anonymous SMS ပို့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Website ကနေပို့တဲ့ SMS တွေကတော့ Receiver ဆီကို မြန်မြန်ရောက်ရှိနိုင်တဲ့အတွက် India ရောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေဆီကို စာပို့ချင်ရင် ဒီ Website ကနေလည်း ပို့နိုင်ပါတယ်။
ဒီ Website ကတော့ ပေးထားတဲ့ နာမည်အတိုင်းပဲ Anonymous SMS တွေကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာနဲ့ ပို့နိုင်တဲ့ Website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ Register မှမလုပ်ပဲ ပို့နိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သင့် Personal ကိုထိခိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ချလက်ချ အသုံးပြုနိုင်မယ့် Website တစ်ခုလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။
ဒါကတော့ Anonymous SMS တွေကို အမြန်ဆုံးပို့နိုင်တဲ့ Portal တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ မှာ Smart ဖြစ်တဲ့ Portal တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံ အကန့်အသတ်မရှိပဲ World Wide မှာရှိတဲ့ ဖုန်းနံပတ်တွေကို ပို့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ သင်ချစ်ရတဲ့ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ ဆီကို အပျော်သဘောနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စ နောက်ချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီ Website တွေကိုလာပြီး Anonymous SMS တွေပို့နိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ ဇန်နဝါရီ 19, 2020/ Blog/0Comment